Ny fiara antitra banga dia lamba milay ao aminy | Famoronana an-tserasera
Betsaka ny fomba ahazoana mpandeha an-tongotra amin'ny arabe rehetra amin'ny iray amin'ireo tanàna lehibe ireo mandray anjara amin'ny tetikasa kanto tsy misy tanjona hafa ankoatr'io. Avelao ireo izay mivezivezy amoron-dàlana haneho ny heviny araka ny tiany amin'ny fahalalahana feno nefa tsy mametraka fitsipika mba hiaraha-mahazo zavatra iray.
Ity no hevitra lehibe momba ny Tetikasa Dacia Art izay nanampy ny olona hamorona sy haneho ny heviny amin'ny toerana izay tsy avela hanao izany matetika. Fiara fiotazam-boaloboka fotsy no napetraka ao afovoan-tanànan'i Cluj-Napoca any Romania, ary afaka tsy miteny isika noho ny fahaizan'ireo mponina ao amin'io faritra io.
Ity no hevitra ao ambadiky ny tetikasa iray an'ny zavakanto fiaraha-miasa ho azy izay anananao fiara fotsy fotsy, amboara famafazana miloko ary marika sasany ary ny farany dia mety ho toy ny mitranga amin'ny Dacia Art Project.
Avy amin'ny ankizy, afaka mandeha ny tanora na ny lehibe mametraka ny hevitrao amin'ny famoronana ka eo anelanelantsika rehetra dia ny asa farany dia miorina amin'ity fiara ity izay azo esorina alohan'ny hamadihana azy ho fako. Fomba fanodinana fako tsara ahafahan'ny tsirairay manary setroka miaraka amin'ireo tsifotra miloko sy marika ary hahazo ny fahaizany mamorona avy ao anatiny.
Hevitra iray izay tsy mila teti-bola firy ary io ampahany io dia noho ny fikasana hametraka lamba hafa kely eo afovoan'ny arabe ary azo antoka fa afaka mahatonga ireo mpandeha an-tongotra hahatsapa mihoatra noho ny fanandramana hafa mety hataon'ny filan-kevitry ny tanàna ireo.
Farany ny fiara lasa adala, Fa tsy fiainana adala ve ny fiainana? Azonao atao ny manaraka ity tetikasa ity avy amin'ny pejy Facebook vonona ho amin'izany.
Santionany hafa ny zavakanto an-tanàn-dehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fiara tranainy, fantsom-panafody sasany ary marika sasany eo afovoan'ny tanàna lehibe